KPZ: စင်ကာပူ မှာ အလုပ်ရှာရသော အခက်အခဲများ
စင်ကာပူ မှာ အလုပ်ရှာရသော အခက်အခဲများ
ကျွန်မဘလော့ကို နေ့တိုင်းပို့စ်မတင်နိုင်ပေမယ့် ဘလော့အတော်များများကို နေ့တိုင်းဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မဘလော့က AutoCAD နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ နည်းပညာတစ်ချို့ကို ဖလှယ်ထားတဲ့ဘလော့ပါ။ အခုပို့စ်ကတော့ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ပို့စ် မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မသွားဖတ်ခဲ့တဲ့ ဘလော့က ပို့စ်တစ်ခုကို AutoCAD နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အလုပ်ရှာတဲ့လူတွေ သိသင့်တယ်ထင်လို့ ဘလော့ပိုင်ရှင်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ တစ်စုတစ်တည်းဖြစ်အောင် တင်ပြလိုက်တာပါ။ မူရင်းပို့ကို ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမှာ သွားဖတ်ပါနော်။ ခွင့်ပြုချက်ပေးတဲ့ ကိုစိုင်းထွန်းကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ထပ်လောင်းပြောပါရစေ။
အင်း ၂၀၀၅ ခုနှစ်လောက် ကပေါ. မြန်မာပြည် မှာနေရင်း စင်ကာပူမှာ သွားအလုပ်လုပ်ချင်တော. စင်ကာပူ က အလည်ပြန်လာတဲ.ကိုကို၊မမ တွေရဲ. စကားတွေ နားစွင်.ရတာပေါ.။ သူတို.တွေရဲ. အပြောအရ စင်ကာပူမှာလောလောဆယ် Draft man (Auto CAD)အလုပ်ဟာ ရှာရလွယ်တယ် ပေါ.နော်.။ ဒါကြောင်. ကိုယ်လဲ မြန်မာပြည် မှာ Auto CAD ကိုဇောက်ချ လေ.ကျင်.လိုက်ပါတော.တယ်။ သင်တန်း တွေ တက်တယ်ပေါ.နော်။ ဒါနဲ. လာမယ် လာမယ် နဲ. လုပ် တာ စိတ်က ပါပေမယ်. ငွေက မလိုက်နိုင်တော. ငွေစုရင်း ၂၀၀၈ ခုနှစ် နှစ်လယ်ထိရောက်သွား တာပေါ.။
စလုံး ကို လာဖို.လဲ အားလုံးသေသေချာချာ ပြင်ဆင်ရတယ်နော်။ မြန်မာပြည် ကတည်း က သူငယ်ချင်း ကို နေစရာ တနေရာ ရဖို. ၁ လလောက်ကြိုပြောရတယ်။ အဲ.လိုမှ မဟုတ်ရင် ရောက်လာလို. နေရာစရာ မရ လို. တည်းခိုခန်း တွေ ၊ သူများ အိမ်ဧည်.ခန်းတွေ ကပ်ပြီး အိပ်ရတာ တွေ ဖြစ်မယ် လို. သူငယ်ချင်းကပြောပြထားတယ်လေ။
စလုံးကိုလေယာဉ်ဆိုက်တဲ. အချိန် က သူငယ်ချင်း ရဲ. အလုပ်ချိန်ဖြစ်နေလို. လိပ်စာ ကို Taxi ဆရာ ပြပြီး နေရမဲ. အိမ်ကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ချီတက်လာရတယ်လေ။ စလုံးက တရုတ်တွေ က တော်တော် ကိုသဘောကောင်းတယ် ခင်ဗျ ရွဲ.ပြောတာ၊ Taxi ဆရာ ကလဲ တိုက်ခန်း (Block)အောက်မှာ ထိုးရပ်ပေးတယ်လေ။ ဒီတော. ပိုက်ဆံရှင်းပြီး ကိုယ်.အထုပ်အပိုးတွေ ကို ကားနောက်ဖုံးကနေ ဆွဲချရတယ်ပေါ.။ ဒါကို ကူညီမယ် မရှိပဲ အဲ.နေ.က မိုးရွာ နေတော. သူကားနောက်ဖုံး ရေစိုမှာ ဆိုးလို. "အမြန်လုပ် ကားနောက်ဖုံး ရေစိုကုန်တော.မယ်" လို.တောင် မာန်လိုက်ပါသေးတယ်။ ဒါကတခု။ နောက်တခု က အခန်း က အပေါ်ထပ်မှာ ဆိုတော. တက်ရတာပေါ. ဓါတ်လှေကားနဲ.။ တိုက် က ဓါတ်လှေကား ၂ စင်း ရှိတော. မဟုတ်တဲ. ဘက်ကို မှားတက်သွားမိတော. လုံးဝ ကိုလမ်းပျောက်တော.တာပေါ.။ တိုက်နံပါတ်ကလဲ တူနေတယ် ဘာလို.ရှာမတွေတာတုန်းဆိုတော. တိုက်ခန်း တခုက ထွက်လာတဲ. တရုတ်မ ကြီးကို မေးတယ် တိုက်ခန်း နံပါတ် xx-xx က ဘယ်မှာ တုန်း ဆိုတော. "Don't Know" ဆိုပြီး အခန်းတံခါး ကိုဆောင်.ပိတ်ပြီး သူ.အိမ်ထဲ သူဝင်သွားတယ်လေ။ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် မသိဘူးလို.ပြောရင် သေမယ်ထင်မယ်နော်။ ပုံစံ က သူအိမ်ရှေ.ထွက် လေညင်းခံ နေတာ ကို နှောက်ယှက်ခံရတဲ. မျက်နှာပေါက်နဲ.။ သြော် နောက်ဆုံးမှ အောက်ဆင်း ပြီး နောက် ဓါတ်လှေခါးနဲ. တက်မှ စလုံးက ကိုယ်.ရဲ. Home Sweet Home လေးကိုရောက်ပါတော.တယ်။ သူငယ်ချင်း က အိမ်သော.ကို အိမ်ရှေ.က ရူးဖိနပ် ထဲ ထည်.ထားတယ် နိူက်လိုက်လို.မှာထားလို. နိူက်ပြီး အိမ်ထဲ ရောက်ပါတော.တယ်။ ဟူး မောလိုက်တာ။
ကဲ လုပ်ငန်း စပြီဗျိုး ညှားပြီ www.jobstreet.com , www.jobsdb.com တို. Strait Time သတင်းစာ တို.နဲ.။ အလုပ် ကတော. လျှောက်တယ် ၁ နေ.ကို ၅ ခုနှင်.အထက်။ အဲ.ဒါတောင် ၁ ပတ်လုံးမှ အင်တာဗျူးက ၂ ခုလောက်ရရင်ကံကောင်း။ တခါ ကြုံဖူးလိုက်တယ် ဖုန်း ၀င်လာတယ်လေ ကိုယ်ပြောတဲ. အင်္ဂလိပ် လေသံကို နားထောင် ပြီး "Where are you from?" လို.မေးတယ်လေ။ ဒါနဲ. ဖြေတာပေါ. "MYANMAR" လို.။ ပြန်ပြောတယ် စလုံးမ က "Sorry, BURMA CANNOT" ဆိုပြီး ဖုန်းချသွားပါလေရဲ.။ အင်း မလွယ်ပါလားနော်။
ခေတ်ဆိုတာလဲ အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေပါတယ်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ် က ခေတ်စားတဲ. အလုပ်ဈေးကွက် နဲ. ၂၀၀၈ ခုနှစ် အလုပ်ဈေးကွက်နဲ. မတူဘူးလို.ပဲ ကျွန်တော်ယူဆ လိုက်ပါတယ်။ ဘာလို.လဲ ဆိုတော. မြန်မာပြည် ကနေ Draft man အလုပ်နဲ. လာရှာတဲ. သူ ပေါများ လာတော. အလုပ် ရှာရတာ ခက်ပြီး လစာကလည်း အင်မတန်ကို လျှော.နည်း သွားလို.လေ။ စင်ကာပူရဲ. အလုပ်သမား ၀န်ကြီးငှာန ရဲ. rule အရ Special Pass (SP)တစ်ယောက် ရဲ. လစာ က ဒေါ်လာ ၁၈၀၀ အနည်းဆုံးရတဲ.သူဖြစ်ရမယ်ဆိုတော. ဒုက္ခရောက်တော.တာပေါ.။ ဒါပေမယ်. အချို.သော ကုမ္ပဏီ တွေလဲ နားလည်မူနဲ. လစာ ၁၈၀၀ အောက် ရပေမယ်. S Pass ကို ၁၈၀၀ နဲ. လျှောက်ပေးပြီး နောက်မှ အချင်းချင်း သဘောသူညီမူ ယူစားပြီး လစာ ထဲ က ပြန်ဖြတ်တာတွေလဲ ရှိပါတယ်။
Draft Man အလုပ်တိုင်း ၁၈၀၀ အောက် ရတယ် လို.တော. မဆိုလိုဘူးပေါ.လေ။ တချို. လုပ်သက်ရှိ တဲ. ကျွမ်းကျင်တဲ.သူတွေ ဆိုလဲ ဒီထက်မကရကျပါတယ်။ ကျွန်တော် ကတော. အလုပ်အတွေ.အကြုံမရှိတော. အစခက်တာပေါ. လေ။
Draft man အလုပ်ဆို ရင် ၀က်ဆိုဒ် ကနေ ရှာ တာ ထက် သတင်းစာကို ပိုအားကိုးရတယ်။
သတင်းစာမှာ Walk in အင်တာဗျုးဆို ပြေးပေတော. ပေးထားတဲ. လိပ်စာ ကို။ ဒါမျိုးဆို သေချာပေါက် မြန်မာ တွေ တန်းစီ နေမယ်ဆိုတာ။ ဒီတော. မြန်မာ တွေ က ကိုယ် အလုပ် မရ မှာ ပြန်ရမှာ ကြောက်တာနဲ. လစာ ကို အပြိုင်အဆိုင်လျှော.ကျရင်းနဲ. စလုံး ချစ်တီးတရုတ် အကြိုက် $1000 အောက်ထိကို ကျသွားတက်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ. အင်တာဗျူးလေး ၇ ခု ၈ ခုလောက် ဖြတ်သန်းပြီး ၁ လ ကျော် လို. Social visit pass ကို online ကနေ ၁ ခါ တိုးပြီးမှ အလုပ် တခု နဲ.သွားငြိ တယ်လေ။ အင်တာဗျူးလဲ အဆင်ကိုချောလို.ပေါ.။ ကဲ မင်းကို ရွေးလိုက်ပြီ ဆိုတာနဲ. ကုမ္ပဏီ က HR ကို ကိုယ်ရဲ. အချက်အလက်တွေ ပြောပြပေးလိုက်ပြီး အိမ်ကို စိတ်ချမ်းသာ စွာနဲ. လက်ခါးမောင်းခတ်ပြီး ပြန်လာတာပေါ.။ ”ငါ အလုပ်ရပြီကွ!!!!” ကုမ္ပဏီ က S Pass ကို online ကနေ တင်ပေးမယ် ဆိုတော. ၃ ရက် ကြာရင် အဖြေသိရပြီလေ။ တချို. သော ကုမ္ပဏီတွေ ကတော. စာတိုက်ကနေတင်တယ် ဒါဆိုရင်တော. ၃ ပတ်ကြီးတောင်စောင်.ရမှာပေါ.။
သုံးရက်ပြည်. တာနဲ. www.mom.gov.sg မှာ ကိုယ်ရဲ. S Pass status ကို ၀င်ကြည်.တော. Reject ပါတဲ.။ ဒီတော. MOM ကို သွားပြီး officer နဲ. သွားတွေ.တာပေါ. ဘာလို. Reject ဖြစ်ရသလဲ ဆိုတာ သိရအောင်။ Officer ကရှင်းပြလိုက်တော. ကုမ္ပဏီ က မင်းရဲ. S Pass ကိုတင်တဲ. လစာ ဒေါ်လာ ၁၈၀၀ ထက်နည်းနေလို. Reject ဖြစ်ရတာပါတဲ.။
ဟိုက် ကျွန်တော်ထင်တာ စလုံးက ကုမ္ပဏီ တွေ ဒါမျိုး ကိစ္စတွေ ကို Understood ဖြစ်နေပြီ လို.အောက်မေ. လိုက်တာ အခု တော. ငါးပါးမှောက်တာပေါ.။ ဒါကြောင်. အားလုံးမှတ်ထားကျပါ ကိုယ်.လစာ က ၁၈၀၀ ထက်နည်းရင် HR လူကို S Pass မတင်ခင် ၁၈၀၀ နဲ. တင်ပေးဖို. ပေးထားကျပေါ.။ အလုပ်ရလို. ကျွန်တော.လို. ၀မ်းသာ မစောနဲ.ဦးနော်။ တကယ်လို. လစာ ၁၈၀၀ နဲ.တင်လိုက်လို. Reject ဖြစ်သွားရင် အသနား တင်ပြန် ပြန်ကျဖို. က ၃ ပတ်ကြီးများတောင် စောင်.ရတယ်လေ။ ဒါဆို အလုပ်ရှာသူအနေနဲ. မြန်မာပြည် ပြန်ရဖို. ရာခိုင်နူန်း က များသွားပြီလေ။
ဒါနဲ. ကုမ္ပဏီ ကို ပြေးရပြန်ပါတယ်။
ကျွန်တော် - Why did you apply my S Pass with salary of less than $1800.
စလုံး မ - I just applied with your actual salary.
ကျွန်တော် - No. As one of MOM Criteria, the salary must be at least $1800 foraS Pass Holder.
စလုံး မ - Sorry. I cannot do such kind of illegal thing.
သြော် ဒီ စလုံးမ တယ်လက်ပေါက်ကပ် ပါလား။
ကျွန်တော် - OK. Let do it this way. Just apply for me with $1800. Every After pay day, you can deduct from my salary Ok?.
စလုံး မ - Sorry. I think my boss won’t agree with that. You go home and wait lah. Let me discuss with my boss.
သိတာပေါ. ဒီလိုပြောပြီး ပထုတ် လိုက်တာ။ ကျွန်တော်. စိတ်ထင် သူတို. က စင်ကာပူ လူမျိုးတွေ ပဲ အလုပ်ခန်.ဖူးတဲ.ကုမ္ပဏီ ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။ MOM ရဲ. စည်း ကမ်း ချက်တွေ ကို နားမလည် တော. ကြောက်တာနေမှာပေါ.။ အစကတော. ဖုန်းမျှော်သေးတာပေါ.။ နောက်တော. အဲ.ကုမ္ပဏီ က ကျွန်တော်လျှောက်ထားနဲ. ရာထူးနဲ. သတင်းစာထဲမှာ ပြန်ပြီးကြော်ငြာ ထပ်ဝင်တယ်လေ “Singaporean and PR only need to apply” တဲ.။ ဒါဆိုသဘောပေါက်။
ဒါနဲ. Stay က ၁ ပတ်ပဲ ကျန်တော.တယ်လေ။ ငါဘာလုပ်ရမလဲ? မြန်မာပြည် ကို ပြန်ပြီး ပြန်လာမလား။ မလေး ကို ၁ ပတ်လောက် သွားရှောင်မလား? မလေးရှောင် လို. ပြန်ဝင် လာရင် တချို.လဲ Stay ၅ ရက် ၁ ပတ် လောက်ရပြီး မြန်မာပြည် ပြန်၇တာတွေ ရှိတယ် လို. လူတွေ ကတော. ပြောကျတာပေါ.။ ကိုယ်.အလှည်.ကျ ဘယ်လို လာမလဲတော. ဘယ်သူ အတပ်ပြောနိုင်မလဲ။
အခုတော. မရတော.ဘူးလေ။ ပုံစံ က ခေါင်းပန်းလှန် ရမယ်။ ခေါင်း က မြန်မာ ၊ ပန်း က မလေး ပေါ.။ ဒီတော. ငါ မလေးရှားရင် ပြန်ဝင်လာလို. Stay မရသည်ထားဦး မလေးရှား ကို ပါ အဆစ် ရောက်ဖူးမယ်။ ဟိုက ကျောင်းတက်နေတဲ. သူငယ်ချင်းကလဲ "စိတ်မပူနဲ. လာခဲ. စလုံးရောက်တုန်း မလေး လာလည်ပေါ. ကွ ကံကောင်းရင် စလုံး ပြန်ဝင်လို. ရရင်ရမှာ၊ မရတော.တော. မလေး ရောက်တာ အမြတ်ပေါ. " လို.တော. မလေး ကို စိတ်ယိုင်သွားပြန်ရော။
ကြားရပြန်ပါတယ် နောက်တယောက်ဆီ က။ "ဘာလို.မလေးရှားသွားမှာလဲ။ စလုံးကို ပြန်ဝင်လာလို.မရရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ မင်း ၂ ခါ ကုန်ဖြစ် မှာပေါ.။ မြန်မာပြည် ကို ပဲ ၁ ပတ်လောက် ပြန်ပြီး ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လာရင် Visa သက်တမ်း က ၆ လ ထိ တောင် ရတယ်" လို. ဆိုပြန်ပါတယ်။
ကဲ ကျွန်တော် ဘယ်သူ.စကားယုံရမှာလဲ ??????? နောက်ဆုံးကျွန်တော် ဘယ်သွားတယ်ထင်လဲ???
ငါမြန်မာပြည် ပြန် ရင် လူတွေ က မေးကျမယ် “ဘာလို.လဲ၊ ဘာလဲ၊ ဘာလို.တုန်း “ ။ အဲ.ဒါတွေ ကို မျက်နှာ ချင်းမဆိုင်ချင် တာနဲ. စိတ်ကိုဒုန်းဒုန်းချပြီး ပင်နီဆူလာ ပလာဇာ မှာ မလေးဗီဇာ တင်လိုက်ပါတယ်။ ဒေါ်လာ ၃၀ ကျပါတယ်။ မလေး ဗီဇာ ကို တင်ရင် ၄ ရက်ကြိုတင်ရတယ်နော်။ မှတ်ထားဦး။
မလေး ကို ၂ မျိုးသွားလို.ရတယ်။ Express ကားနဲ. လက်မှတ် ၀ယ်ပြီး သွား လို. ရသလို Bus ကားနဲ. ၃၊၄ ဆင်.စီး သွားရင်လဲ ကွာလာလမ်ပူမြို.ကိုရောက်နိုင် ပါတယ်။ ကျွန်တော် က တော. ဈေးသက်သာတဲ. Bus နဲ.ပဲ အဆင်.အဆင်. သွားတာပေါ.။
မလေး ကို Bus နဲ. သွားနည်း လေး ပြောပြချင်တယ်နော်။ Singapore က Woodland bus interchange ကနေ Bus နံပါတ် ၉၀၃ ကို စီးပြီး စလုံးနဲ. မလေး နယ်စပ် တံတား ပေါ်ရှိ စလုံး Check point ကို အရင်ဖြတ်ရတယ်။ စလုံး Officer က မြန်မာ Passport ဆိုတော. သိတဲ. အတိုင်း “ မင်းဘယ်နေ. ပြန် ၀င်မှာတုန်း၊ မြန်မာ ပြည် အပြန်လေယာဉ်လတ်မှတ်ပြ၊” ဆိုပြီး စစ်တာပေါ.။ ဒီလောက်ပါပဲ။
စလုံး Check point ကို ကျော်ပြီး နောက် တခါ ဟိုဘက်ခြမ်း က မလေး Check point ထို ဖြတ်ပြီး မလေး နယ်စပ် Johor Baru ကိုရောက်သွားတယ်။ အဲ.ဒီ ကမှ တဆင်. Bus ကားနဲ. Lankin station လို.ခေါ်တဲ. အဝေးပြေး ကားဂိတ် ကို သွားရတယ်။ Lankin station ကိုလဲ ရောက်ရော KL KL လို.အော် ခေါ်နေတဲ. စပယ်ရာ တွေရဲ. အော်သံတွေ ကြားရမှာပါ။ ဒါနဲ. ကားလက်မှတ် ရင်းဂစ် ၃၀ ပေးပြီး ကားလူပြည်.တာ ထိုင်စောင်.နေလိုက်ပါတယ်။ စလုံး ဒေါ်လာ ၁၅၀ ဆိုရင် မလေး ရင်းဂစ် ၃၀၀ ကျော်ရတယ်လေ။
Lankin Station ကနေ နေ.လည် ၁၂ ကနေ စထွက်တာ လမ်းမှာ ထမင်းစား တခါ နားပါတယ်။ မြန်မာပြည် ကရှမ်းပြည် ကိုခရီးသွားတဲ. အတိုင်းပဲ တောတောင် တွေ အရမ်းလှပါတယ်။ ညနေ ၆ နာရီလောက်မှာ တော. ကွာလာလမ်ပူထဲ ကိုဝင်လာပါပြီ။ လာကြိုတဲ. သူငယ်ချင်း ရှိတော. အဆင်ပြောတာပေါ.လေ။ သူက INTI ကောလိပ်မှာ ကျောင်းတက် တယ်လေ။ ဒီတော. သူကောလိပ် နဲ.နီးတဲ. သူ.အိမ်မှာပဲ ကျွန်တော် တည်းပါတယ်။ သူတို.ကျောင်းကို အလည်တောင်လိုက်သွားသေးတယ် အာဖရိက နီဂရိုးတွေ အများကြီးပဲ။
မလေး မှာ ၅ရက်အနေပြပြီးမှ စလုံးဗီဇာ တင်လို.ရမယ်ဆိုလို. ကြားထဲမှာ KLCC Tower တို. Genting တို.တောင် အလည်သွားလိုက်ပါသေးတယ်။ မလေးမှာ တော. မြန်မာ တွေ ရှယ်ပေါတာနော်။ ကျွန်တော် စားခဲ.တဲ. စားသောက်ဆိုင် တိုင်းလိုလိုမှာ မြန်မာ အလုပ်သမား (သို.) မြန်မာဆိုင်ရှင် တွေများတယ်။
၆ ရက်ပြည်.တဲ. နေ.မှာတော. စလုံး သံရုံးမှာ ဗီဇာ သွားတင်ပါတော.တယ်။ တင်ရင်းနဲ. ဘေးကမြန်မာတွေ ရဲ. တဆင်.စကားအရ ဒီရက်ပိုင်း စလုံးဗီဇာ တင်ရင် ၉၉% လောက်က Reject ဖြစ်ကျတယ်။ မြန်မာပြည် လေယာဉ်လတ်မှတ် တွဲပြီး ဗီဇာ တင်တယ်လေ။ ဗီဇာကြေး ရင်းဂစ် ၇၀ ပေးရပါတယ်။ နောက်ရက် ပြန်ချိန်းတယ် ဗီဇာ လာထုတ်ဖို.။ အဲ.ဒါနဲ. ၂၄ ပစ္စည်း၊ သံဗုဒ္ဓေ ကို တရဆက်ကို ရွတ်တော.တာပါပဲ။
နောက်ရက် ညနေပိုင်း လောက် ရင်တမမ နဲ. ဗီဇာသွားထုတ်တယ်။ လာပြန်ပြီ Reject တဲ.။ ဘာလို.လဲလို.မေးတော.လဲ မဖြေဘူး။ ဟူး။ ဒီနဲ. အသည်း အသန် စလုံး က သူငယ်ချင်း ကို ပန်နီဆူလာပြေးပြီး စလုံး Re-entry Visa တင်ခိုင်းရတယ်။ စလုံး ဒေါ်လာ ၈၀ ကျပါတယ်။ အဖြေသိဖို. ၂ ရက်စောင်.ရမယ်တဲ.။ ဒီတော. မလေး ကနေ နောက်တခါ ရင်တမမ နဲ.ဆက်စောင်.နေရပါတယ်။ နောက်ဆုံးမရခဲ.လျှင် မြန်မာပြည် ပြန်မည် လို.တောင်တွက်ထားပါတယ်။
ကလင် ကလင်။ သူငယ်ချင်း မင်း ဗီဇာ ရပြီ စလုံးဝင်လာ လို.ရပြီ။ ဟားဟား အလုံးကြီးတလုံးကျသွားပြီ။ နောက် တလုံးက က Check point မှာ အဆင်ပြေဖို. လိုသေးတယ်လေ။ Officer သဘောကောင်းတာလေးနဲ.တွေ.ပါစေ ဗျာ။ ဒါနဲ.ချက်ချင်းပဲ စလုံး ကို ပြန်လာတယ်။ မလေး-စလုံး နယ်စပ် Johor Baru ကို မနက် မိုးသောက် ၄ နာရီရောက်တယ်လေ။ သူငယ်ချင်းကို မနက် ရ နာရီ ချိန်းထားတော. စောင်.နေရတာပေါ.။
သူငယ်ချင်းက စလုံး citizen လေ။ ဒါကြောင်. သူက စလုံး ကနေ မလေးကို တံခါးမရှိ ဓါးမရှိလာလို.ရတယ်လေ။ ဒါကြောင်.လဲ သူက စလုံး check point နဲ. မလေး check point ကိုဖြတ်ပြီး ကျွန်တော. ကို ဗီဇာလာပေးလို.ရတာပေါ.။ Citizen မဟုတ်ရင်တော. ဒါမျိုးလုပ်လို.မရဘူးလေ အနည်းဆုံး မလေး ဗီဇာ ရှိမှ ဒီ Johor Baru ကိုလာလို.ရမယ်။
ကဲ ရောက်ပါပြီ စလုံး check point ရောက်ပါပြီ။ Officer က မြန်မာ ပတ်စပို.စ် ဆိုတော. အခန်းထဲ ကြွခဲ.ပါတဲ.။ စလုံး မှ Stay ရဖို. သူ.အပေါ်မှာမူတည်တယ်လေ။ အကျိုးအကြောင်းဆီလျှော်အောင် ပြောနိုင်ရင် ၁လ၊ မပြောနိုင်ရင် ၄ရက် ၁ပတ်ပေါ.။ Visa မှာ stay ကိုကျွန်တော် ၁ လဖြည်.ထားတဲ.အတွက်
Officer - ဘာလို. စင်ကာပူမှာ ၁ လ ထပ် နေချင်ရတာလဲ။
ကျွန်တော် - ကျွန်တော်. S Pass က လစာမှာ 1800 ထက်နည်းလို. Reject ထိတယ်။ အဲဒါကြောင်.မလေးကို ခဏ Stay ရှောင်လိုက်တယ်။ အခု ကျောင်းတက် မယ်လို.ဆုံးဖြတ်ထားတဲ.အတွက် စလုံး က ကျောင်းတွေ ကို အေးအေးဆေးဆေး စုံးစမ်း လို.ရအောင် ၁ လ လောက် တော. လိုချင်ပါတယ်။
အဲဒါနဲ. သူက ကျေကျေနပ်နပ် ပဲ ၁လ ဆိုပြီး တံဆိပ်တုံးထုပေးလိုက်ပါတယ်။ Stay တစ်လ ရမှလဲ နောက်ထပ် Stay တစ် လ ထပ်တိုး လို.ရမှာလေ။ ၄ ရက် ၁ ပတ်ဆို ထပ် တိုးလို.မရတော.ဘူးလေ။ အခုလို ကျောင်းတက်မယ် လို. ပြော ဒါမှ အဆင်ပြေမယ် လို. အသိမိတ်ဆွေတွေ ကသင်ပေးလိုက်တာကိုး။
စလုံးမှာ ပြန်နေရတဲ. Draft Man အလုပ် ကရှားတော. ၁ လအတွင်း အင်တာဗျူးက ၂ ခုလောက်ပဲရတယ်လေ။ ၂ခုလုံး အဆင်မပြောပါဘူး။ ဒါနဲ. Online ကနေ ထပ်တိုးရပြန်ပါပြီ သက်တမ်းမကုန်ခင်လေး။ အဲ.ဒီ ၁ လ ပြီးရင် ဂိတ်ကုန်ပြီလေ။ အမိနိုင်ငံကို ၀မ်းနည်းစွာနဲ. ပြန်ရမှာပေါ.။
ကလင် ကလင် "မင်းကို ငါ.တို Boss က အင်တာဗျူး မယ်တဲ. လာခဲ.ပါဦး" ဆိုပြီး ရင်းနှီးသူ အစ်ကိုတစ်ယောက်ဆီမှ ဖုန်းဝင်လာတယ်။ သူနဲ. က အရင်ကတည်း ကိုယ်.အခက်အခဲတွေ ကို ပြောပြထားတာကိုး။ အဲဒီ အင်တာဗျူး တခုလုံး အဆင်ချောပါတယ်။ လူခံ ကလဲ ရှိနေတော. အားရှိတာပေါ.။ ခန်.မခန်. ကို နောက်နေ.ဖုန်း ဆက်မယ် ဆိုပြီး သူဌေး ပြောလိုက်ပါတယ်။
ကလင် ကလင် အဲ.ဒီ ဖုန်းသံကို အကြောက်ဆုံး။ ဒီတခါ တော. ဖုန်းကလေး က ချစ်ဖို.ကောင်းပါတယ်။
"ကုမ္ပဏီ ကို လာခဲ.ပါ။ S Pass တင်ရအောင်" တဲ.။ ဒီကုမ္ပဏီ ကျတော. S Pass ကို ၁၈၀၀ နဲ. လိမ်လိမ်မာမာ တင်ပေးတယ်။ သူတို. က နပ် ပြီးသားလေ မြန်မာတွေ ကို ဈေးနှိမ်ပြီး ခန်.နေကျလေ။
ကဲ ဒီလောက် အလုပ်လုပ်ချင်နေ တဲ. အကောင် ရူန်းပေတော.။
နောက်အလုပ် လာရှာမည်. မြန်မာ Draft Man များ ကံကောင်းပါစေသား . . . . .
interior design-3ds max.mg4 - October 1, 2008 at 3:05 AM
i'm also working in singapore asa(QS, interior designer by using 3ds amx, photoshop, auto cad), my blog address is
i want to share and dissus my knowledge about 3ds amx and interior design.
Zaw Min - October 3, 2008 at 9:17 PM
Could you plz help me something? I am working as an electrician in S'pore now. At first, i studied AutoCAD(Intermediate & Advanced courses) in Quick CAD training class in Yangon to come here as an draftman.But, due to the financial problem, i had to come here earlier. I am still practicing my courses here. I am fully in tourch with Autocad. But, i had no experience in the past. So, how shall I apply for the post? I applied so many. But, i have never been selected for interview. So, could you kindly tell me how to writeaCV for draftman? I will be highly appreciated if you could help me?
You are viewing "စင်ကာပူ မှာ အလုပ်ရှာရသော အခက်အခဲများ"